I-CABANA Sands (BUNGALOW) 450m ukusuka ogwini lolwandle - I-Airbnb
I-CABANA Sands (BUNGALOW) 450m ukusuka ogwini lolwandle
Sorrento, Victoria, i-Australia
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Cassie
U-Cassie Ungumbungazi ovelele
Isitayela sethu esilungisiwe se-Coastal Boho i-BUNGALOW ingamamitha angu-450 ukuya onqenqemeni lwamanzi lwe-Koonya surf beach ngendlela eyodwa kanye nokuhamba okulula okuyimizuzu engu-10 ukuya olwandle olupholile. Ukushayela imizuzu emibili ukuya emadolobheni aseSorrento naseBlairgowrie. Kuvuselelwe ngetimu ye-Scandi Boho, equkethwe ngokuphelele ngengadi yakho yangasese ne-sandpit. Amamitha angu-50 ukuya esitolo se-Koonya General esigcina zonke izidingo zakho ezijwayelekile. Inhloso yethu ukuthi uhlale uthule, ujabulele futhi udale izinkumbulo ende zempilo.
* AKUKHO UKUBHUKHA KWE-SCHOOLIES NOMA AMAPHATHI AVUNYELWE
* * IZILWANE EZIFUYWAYO AZIVUNYELWE NGOKUQINILE ENDLINI
* *WONKE AMASHIDI NAMATHAWULA AHLANZEKILE AFAKIWE ENANINI *
* Indawo enakho konke emgqeni omncane kakhulu wenkabazwe eseningizimu.
Ukuphonsa itshe emnandi ye-Koonya General Store ukuze uzijabulise ngemva kwezinsuku zokutshuza emagagasini.
Izici ze-Bungalow ezizimele:
•. Umklamo we-Boho wasogwini olungiswe ngokuphelele
•. Ikamelo lokulala eliyinhloko elinombhede weNdlovukazi
• Ikamelo lesibili elinemibhede emibili elala umuntu oyedwa
•. Indawo yokuphumula
•. Ikhishi elincane elinehhavini, i-cooktop ne-microwave netafula lokudlela.
•. Indlu yokugezela yesimanje
eneshawa •. Hlukanisa i-air conditioning/okokushisisa endaweni yokuphumula
·. Ama-Heaters emakamelweni
ene-Netflix • I-WIFI Esezingeni Eliphezulu •.
Igceke elikhulu elingemuva elinendlu ye-Sandpit ne-cubby, elungele izingane
• I-portacot yomntwana nesihlalo esiphakeme siyatholakala uma kucelwa
•. Indawo yokupaka izimoto ebiyelwe emgwaqeni ongenayo.
Itiye, ikhofi, ushukela, insipho, i-shampoo, i-conditioner nemikhiqizo yephepha lasendlini yangasese enikezwa lapho kufikwa, uma izivakashi ziphelile kulindeleke ukuthi zinikeze okwengeziwe.
-Sicela uqaphele ukuthi indawo ingusayizi we-Bungalow, efana nefulethi elinamakamelo okulala angu-2. Kodwa ifanele abantu abangu-3 kuya kwabangu-4 ngokunethezeka. Siyayithenga ngokuvumelana nosayizi wayo. Uma ufuna okuthile okuvulekile kakhudlwana Indlu Yethu Yangaphambili ingakufanela kangcono. Ngicela ungithumelele umyalezo welinki Yendlu Yangaphambili uma unesifiso.
-Sicela uqaphele ukuthi asinayo i-BBQ eBungalow, kuphela Endlini Engaphambili.
Izithombe eziningi ekhasini lethu
cabanasandsbeachhouse STRICTLY NO SCHOOLIES noma AMAQEMBU
4.92 · 251 okushiwo abanye
UCassie Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Sorrento namaphethelo